Anping Sanxing Wire Mesh Factory hwagadzwa muna 1990, iyo iri nyanzvi akaigadzira welded waya pajira riya ,welded waya pajira riya Panel ,hexagonal waya pajira riya ,neketani kubatana noruzhowa , crimped wire mesh, Stainless simbi waya pajira riya ,fence netting ,rakawedzerwa simbi pajira riya , hwindo nechidzitiro , galvanzied mativi waya pajira riya , fiberglass mesh , nesefa pajira riya , Barbed waya , nechisvo Barbed waya , dema annealed waya , cut wire etc. zvigadzirwa yedu zvinowanzoshandiswa maindasitiri, zvokurima, kurimwa, kuvaka, nezvifambiso uye mugodhi. By zvino hatina vatotanga noukama bhizimisi vatengi 45 kubva Southeast Asia, Asia, Europe, Middle East, Africa, uye quadruple ari kutengesa mari uye vatengi pagore.
Pane 5 makambani bazi kutora 19000 mativi metres, vashandi 165 unyanzvi uye 10000 matani kukwanisa pamwedzi kuita inzwi mirairo siyana.
Tine vakakwana rokutengesa chikwata nezvinhu unhu anokonzera vatengi, asiri vanorega kufamba pakutsvaka mberi, uye kupa pashure-okutengesa basa rakanaka. Vanopfuura 15 oversea rokutengesa kutaura Chirungu uye kanopfuura 4 makore kushanda nezvakaitika avhareji.
20 dzichiri nemidonzvo hwedu kwemakore anopfuura 10 nokuda avhareji angatanga zvigadzirwa zvitsva 5 pamwedzi. Chekutanga hofisi yedu mhiri kwemakungwa nekunhonga yokutengesa infomantion uye ipapo isu kuva zvinhu zvitsva zviri vanosangana pamusika yakawanda.
ISO 9001, ISO14001 uye SGS certifiedOur yepamusoro utariri hurongwa anoenderana ISO 9001, ISO14001 uye SGS nhungamiro uye tiongorore danho rimwe pakuburitswa kwacho. We vatenge mbishi zvokuvakisa yaizivikanwa vagadziri muna China, uye ongorora zvinhu vasati warehousing. 6 rokuongorora Our equipments The Quality Deparment bings muna 6 rokuongorora equipments uye anoitisa pre-pakukurukura inspections kuti yokupedzisira zvigadzirwa.
Tine chivimbo mune zvinhu zvedu nebasa rakanaka uye faverable mutengo. We vanoomerera 4 dzezvakanaka yepamusoro, mutengo, kuvimbika uye basa izvo kuramba chinozoiswa yose kutengesa.